Myanmar (Burma) Backpacking Guide
If there is just one piece of advice I can give you about Myanmar (also previously known as Burma) it’s that you should go now. Not in5years, not in 10 years… but now. Following government reforms and lifting of international sanctions, Myanmar has recently become more accessib ...
Jun 18 2014 No Comments
ထမင်းချက်တဲ့အခါ ထမင်းပေါင်းအိုးတွေနဲ့သာချက်ကြတော့တဲ့ အခုခေတ်မှာထမင်းရည် လို့မေးလိုက်ရင် တော်တော်ရှာရမယ် ထင်ပါတယ်။ ထမင်းရည်ဟာဆန်ကိုချက်တဲ့အခါ ရေနည်းနည်းပိုထည့် လို့ ထမင်းကျက်ပြီး နူးနပ်အောင်မနှပ်ခင် ငှဲ့ထုတ်လို့ ရလာတဲ့ အရည်ကြည်လေးကိုခေါ်တာပါ။ ဒီလိုထမင်းရည်ရှားနေတဲ့ အချိန်မှာထမင်းရည ...
ဟာသသရုပ်ဆောင် ၊ဒါရိုက်တာကုသိုလ်သည် ဇွန်၁၅ရက် မွန်းလွဲတစ်နာရီကတောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်ရှိ အောင်ရတနာဆေးခန်းတွင် အသဲနှင့် အစာအိမ် ရောဂါတို့ဖြင့် အသက်၆၁နှစ်တွင် ကွယ်လွန် ခဲ့သည်ဟု ဒါရိုက်တာမောင်သီကမဇ္စျိမကိုပြောသည်။ "သူခံစားနေရတာ ကြာပါပြီ။ သူကွယ်လွန်ချိန်က အသက်ခြောက်ဆယ်နဲ့ နှစ်လစွန်းရှိ ...
Jun 16 2014 No Comments
Pyin U Lwin – where you can see 19th century country style
The colonial hill station of Pyin U Lwin wasasummer retreat during British rule, its altitude (1070m) and relatively cool climate allowing the British ruling class to escape the fearsome heat of Mandalay and lower Myanmar. Delightfully cool and pleasant the whole year round.The ...
Heritage Building Walking Tour (3 hours) Yangon boasts one of the most spectacular urban landscapes in the world. Buddhist buildings of global fame, like the Shwedagon Pagoda, stand amidst colonial landscape of British Burma. Due to the isolation Myanmar has had from the rest of ...
Jun 15 2014 No Comments
ခြေထောက်ဆေးပါ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ခြေထောက်ကို စိမ်ထားပြီး ဆေးကြောပေးတာဟာ သက်သောင့်သက်သာရှိသလို ပင်ပန်းမှုတွေလည်း ပြေစေကာ ၊ ရေလောင်းပြီး ခြေထောက်ဆေးတာထက် ခြေထောက်ကို ပိုပြီး သန့်စင်စေနိုင် ပါတယ်။ အလုပ်က ပြန်လာပြီး ညစာစားပြီးလို့ တီဗီကြည့်ရင်းအပန်းဖြေနေ ချိန်မှာ ခြေထောက်စိမ်ထားပေးလို့ ...
ယခုတလော အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပြန်နှံ့နေပြီး လူပြောများနေတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်က စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအချို့ ပါရာစီတမောဆေးသောက်အပြီး ရင်ပူလာလို့ဆိုကာ ရေခဲသေတ္တာထဲက ကုတ်အေးအေးလေး ကို မော့သောက်လိုက်ရာမှ ပါးစပ်မှာ အမြုပ်တစီစီထွက်လာလို့ ဆေးရုံအပို့ ကားပေါ်မှာတင် အသက်ဆုံးရှုံး သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတစ ...
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အသက် ၄၅ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အရွယ်တို့တွင် ထက်ဝက်ခန့်မှာ ခံတွင်းကင်ဆာ ခံစားနေရ ကြောင်း ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။ ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများတွင် ကွမ်းစား သုံးခြင်း၊ ဆေးလိပ် သောက် သုံးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကွမ်း တစ်မျိုးတည်း စားသုံ ...
ပါးစပ်နံတာပာာ လူအများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကယ့် ကိုစိတ်ညစ်စရာပါ။ ပါးစပ်နံ့ နံတတ်တဲ့သူတွေမှာ သွားဘယ်လောက်တိုက်တိုက်၊ Mouthwash ဘယ်လောက်သုံးသုံး၊ အဲဒါတွေအနံ့ပြယ်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ပြီးနံလာ တတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ပါးစပ်နံခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံကတော့ ပ ...
Jun 12 2014 No Comments
Nanmar Myanmar Special Incentive Travels & Tours
BOMES Co., Ltd